4 FXCC MetaTrader
Home / nyiwe / PC / MT4 maka PC
MetaTrader 4 bụ otu n'ime usoro ntanetị azụ ahịa kachasị ewu ewu n'ụwa taa. Ngwa ngwá ọrụ niile dị mkpa na-enye aka ka ndị ahịa nwee ike ime nnyocha na nyocha, ịbanye ma na-apụ na ahịa na ọbụna jiri ndị ọzọ na-arụ ọrụ na trading software (ọkachamara Advisors ma ọ bụ EA). Enweghi obi uto na ndi ahia na EA's? MetaTrader na-eji asụsụ nke mmemme ya bụ MQL4, nke na-enye gị ohere ịmepụta ígwè ọrụ ụgbọ okporo ígwè gị.
MetaTrader 4 Broker software na-enye nnukwu ngwaọrụ nke nyocha. E nwere oge itoolu maka ngwá ego ọ bụla. Ndị a na-enye nkọwa zuru ezu banyere nyocha okwu. Ihe omuma akwukwo nke ihe kariri 50 ihe ngosi na ihe ndi ozo bugharia usoro nyocha, nyere ndi ahia aka ichota ihe ndi ozo, kpochapu uzo di iche iche nke ahia, kpebie ihe nbata na nputapu, bido ihe obula ma debe onwe ha "nyocha".
MetaTrader 4 na-agụnye ọrụ ahịa niile nke ndị ahịa ahịa oge a chọrọ. Iwu ahịa, na-echere na ịkwụsị iwu, nkwụsị na-akwụsị - niile dị n'ebe ahụ na MT4 na mkpịsị aka gị.
Ihe ikpo okwu na-enye iwu ka etinye ya n'ụdị dịgasị iche iche, gụnyere ịzụ ahịa kpọmkwem site na chaatị. Mbadamba akara ndị e tinyere na ya bụ ụzọ bara uru iji chọpụta isi ntinye na ntụgharị.
4 MetaTrader gụnyere mgbasa ozi ahia, ngwá ọrụ nwere ike iji nyere gị aka ịgbaso ọnọdụ ahịa ahịa kachasị mma na ọnọdụ ahịa. Site na FXCC MT4 ịzụ ahịa ahia gị, ike gị niile nwere ike ịbanye n'ime mmejuputa atumatu ahia gị, chekwaa na ụlọ ọrụ ngwaọrụ na MT4 nọ n'ebe ahụ iji kwado gị.
Dị ka azụmahịa azụmahịa ọ bụla, nchekwa nke ozi a na-ebute site na ya dị mkpa. FXCC MetaTrader 4 Broker software na-enyefe ozi gaa na site na ahịa na njikọ XsUMX-bit ezoro ezo. Nke a bụ iji hụ na nchekwa nke azụmahịa gị niile. Na mgbakwunye na nke a, FXCC na-enyekwa ohere ime ka nchekwa algorithms dị elu nke Public Key Cryptography. Ozi echekwara na nke a bụ ihe na-agaghị ekwe omume mbanye na oge ọ bụla.
MetaTrader 4 na-agụnye ọrụ dị iche iche dị mfe nghọta, ya mere ọ na-ewe minit ole na ole iji nweta ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị gị dị ka onye ahia. Igwe okwu nwere ọrụ "Enyem aka" nke nwere ike ị nweta azịza nye ajụjụ ndị kachasị mkpa site na ngwanrọ ahụ n'onwe ya, ya mere i nwere ike itinye uche n'ihe dị mkpa - ahia.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na MT4 enyere ọrụ enweghị ike ịza ajụjụ gị, ndị ọrụ nkwado FXCC nwere ike.
MetaQuotes Asụsụ4 (MQL4)
MetaTrader 4 trading platform come with its own built-in language for programming trading strategies. MQL4 na-enye gị ohere ịmepụta EA gị (ọkachamara ọkachamara) ma mee ka ịzụ ahịa gị dabere na atụmatụ gị. N'iji MQL4 i nwere ike iwuli onwe gi akwukwo ogugu nke omenala, akwukwo na oru nchekwa data. N'iburu ọkwa nke usoro ihe ọmụma Forex MetaTrader 4 Broker, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na forums na ebe nrụọrụ weebụ na-arịwanye elu, ebe ndị ọrụ nwere ike ịmekọrịta ma gbanwee ndụmọdụ na atụmatụ maka ị nweta ihe kachasị na MQL4 asụsụ mmemme na MetaTrader 4 n'ozuzu.
Onye ọkachamara ọkachamara bụ usoro ahia usoro (MTS) jikọtara na atụmatụ ụfọdụ. Ndị ndụmọdụ ahụ agaghị agwa gị naanị ị ga-enwe ike ịbanye ahịa, ma na-emepụta azụmahịa na akaụntụ ahịa na-akpaghị aka ma duzie ha na nri nkesa. Dị ka ọtụtụ usoro ịzụ ahịa, MetaTrader 4 Trading terminal na-akwado usoro nyocha na akụkọ ihe mere eme na ihe ngosi nke njirimara ntinye na nsipu.
Ndị na-egosi omenala bụ MetaTrader 4 na-egosi na akaebe. Ndị na-egosi omenala na-ekwe ka ihe okike nke ndị na-egosi na mgbakwunye na ndị ahụ emetụlarịrị na MetaTrader 4. Dị ka ihe ndị ahụ e wuru na-abata na MT4, a na-eji aka nyochaa ndị omenala na nyocha na ụzụ na enweghị ike imeghe ma ọ bụ mechie ahịa na-akpaghị aka.
Ihe ederede enwere usoro mmemme maka ime otu ihe. N'adịghị ka ndị ọkachamara ọkachamara, Ederede anaghị agba ọsọ ma ọ bụrụ na ha enweghị ọrụ ọrụ.
ọba akwụkwọ bụ databases ọrụ njirimara ebe eji nchekwa MQL4 eme ihe ugboro ugboro. Mgbe ịmepụta otu atụmatụ ma ọ bụ EA na MQL4, ndị ọrụ nwere ike ịbịpụta ha na ụlọ akwụkwọ ọgụgụ ha ma gbakwunye ọrụ ndị a echekwara na ha ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè.